Maxaanan u sameynin isdil?
Qalbigeena wuxuu aadaa kuwa afkaaraha leh ee dilka nololahooda oo dhinaca isdilka. Haddii kaasi aad adiga tahay, waxay ka hadli kartaa dareemo badan, sida dareemaha rajo la’aanta iyo laga quusanin. Waxaad dareemi kartaa sida aad ugu jirtid god qotoda dheer, oo aad ka shakisid inay jiraan rajo walba ee sheyada fiicnaanayaan. Ma jiro qof u muuqdo inuu daryeelo ama fahmo halka aad ka imaaneysid. Nolosha qiimo malahan in la noolaado...ama uu yahay?
Haddii aad wax yar qaadaneysid si aad u tixgelisid in Illaahey u ogolaatid inuu Illaaha runta ah yahay noloshaada hadeer, Wuxuu cadeynayaa side weyn uu dhabtii Yahay, “ma jiro wax aan suurtogal u aheyn Illaah” (Luukos 1:37). Nabarada dhaawacyada la soo dhaafay waxay ku sababeen dareen buux dhaaf ee diidmada ama dayacaada. Taasi waxay u hogaamin kartaa iska-nixinta, xanaaqa, qaraarada, fikradaha aargoosiga, ama cabsiyada aanan caafimaadka aheyn ee dhibaatooyinka ku sababtay qaar ka mid ah xiriiradaada aadka u muhiimsan.
Maxaa ah inaadan u sameynin is dil? Saaxib, dhibaato malahan sida xun ee waxyaabaha noloshaada, waxaa jiro jaceyl Illaah oo adiga ku sagayo si aad ugu ogolaatid inuu kugu Jaheeyo dhinaca kanaalkaaga ee quusanin iyo banaanka iftiinkiisa cajiibka ah. Waa hubaalkaaga. Magaciisa waa Ciise.
Ciisahaan, dambi laawaha Wiilka Illaah, aqoonsiyada iyo adiga ee waqtigaada ee diidmada iyo dulliga. Nabi Isaiah wuxuu qoray Isaga oo Ishacyaah 53:2-6, lagu sharaxayo Isaga sida ninka ee ahaa “quustay oo diiday” qof walba. Noloshiisa murugo ka buuxday iyo dhibaatada. Laakin murugada Uu ku dhashay ma aheyn Midkiisa gaarka ah; waxay ahaayeen kuweena. Waa la duleeliyay, la dhaawacay, iyo la burburiyay, dhammaan sababtoo aH dambigeena. Sababtoo ah Dhibaatooyinkiisa, nololaheeda way isdhimi kartaa iyi sameyso dhammaan.
Saaxibka, Ciise Masiixi wuxuu ku adkeystay midaan marka si looga yaabo inaad haysatid in dhammaan dambiyada la cafiyo. Wax walba ee culeyska noqdo ee dambiga aad sameysay, ogow Inuu ku cafinayo haddii si wanaagsan u heshid Isaga sida Badbaadiyahaaga. “...Soo wac xiliga aniga aan ku jiro dhibaato; adiga ayaan ku gaarsiinayaa¼” (Sabuurradii 50:15). Ma jiraan wax aad si xun u sameysay ee Ciise kuu cafiyo. Qaar ka mid ah Dooqyadiisa ee adeegayaasha guud ee ka go’antahay dambiyada dilka (Muuse), dilaha iyo sineystaha (Boqor Daa’uud), iyo xad gudubka jirka iyo dareenka (the rasuulka Bawlos). Weli waxay heleen cafiska iyo nolosha taagan ee Illaah. “Sidaas darteeda, haddii uu qof uu ku jiro Ciise, waa xayawaan cusub; midka hore wuu baxay, midka cusub ayaa yimid” (2 Korintos 5:17).
Maxaa ah inaadan u sameynin is dil? Saaxibka, Illaah wuxuu diyaar ugu taaganyahay inuu sameeyo waxa “jabay,” ee lagu magaacbo, nolosha aad hadeer haysatid, nolosha aad rabtid inaad isdilka ku dishid. Gudaha Ishacyaah 61:1-3, nabiga wuxuu qoray, “Illaaha WUU ii xilsaaray inaan ku wacdiyo aqbaarta wanaaaqgsan saboolada. Wuxuu ii soo diray inaan ku xiro qalbiyada jabay, si loogu dhawaaqo xoriyada maxaabuusta oo looga siidaayo mugdiga oo maxaabuusta, si ay ugu dhawaaqaan sannAdka naxariista Illaah…si loo raaxo geliyo dhammaan cida barooraneyso, iyo siido kuwa oynayo…si aad ugu nimceyso iyaga taajka quruxda badelkii dambaska, saliida farxada badeLkii baroorashada, iyo dharka ammaanta badelkii ruuxa laga quusto.”
U maw Ciise, oo Hakuu soo celiyo raaxadaada iyo wax ku oolka sida aad aaminsantahay Isaga inuu bilaabo shaqo cusub ee noloshaada. Wuxuu balan qaaday inuu soo celiyo raaxada aad lumisay oo ku siiyo ruux cusub si aad u joogteysid. Qalbigaaga jaban waa u qaali Isaga: “Alabariga Illaah waa ruux jaban; qalbiga jabiyo iyo dareenka qalbiga, Ilaahayow, marnaba uma quusan” (Sabuurradii 51:12, 15-17).
Ma u ogolaaneysaa Illaaha sida Badbaadiyahaaga iyo Illaaliyahaaga? Wuxuu jaheynayaa afkaarahaaga iyo tallaabooyinka—hal maalin waqtigiiba—tillaa Eraygiisa, Baybalka. “Waxaan kuu tilmaamayaa oo ku barayaa qaabka ah inaad u socotid; waan kaala talinayaa oo ku illaalinayaa” (Sabuurradii 32:8). “Wuxuu noqonayaa hubaalka aasaaska waqtiyadaada, keydka taajurka ah ee badbaadada iyo ximada iyo cilmiga; cabsida ILLAAH waa muhiimka qasnada” (Ishacyaah 33:6). Masiixiga, waxaad waad dhibaatoneysaa, laakin hadeer waxaad heleysaa rajo. Isgaa waa “saaxib kaaga dhawaado wallaalka” (Maahmaahyadii 18:24). Naxariista Illaah Ciise ha kuugula jiro saacada go’aanka.
Haddii go’aansatid inaad aamintid Ciise Masiixi sida Badbaadiyahaaga, uga hadashid erayadaan qalbigaaga ee Illaah: “Illaah, waxaan kuuga baahannahay nolosheyda. Fadlan iga cafi dhammaan inta aan sameeyay. Waxaan ku saartay aaminaadeyda Ciise Masiixi iyo aaminsannahay inuu yahay Badbaadiyaheyga. Fadlan i nadiidi, i daaweey, oo iigu soo celi raaxo nolshdeyda. Waaad Ku mahadsantahay Jaceylkeyga ee aniga iyo dhimashada Ciise ee matalaadeyda.”